Bogagga shabakadaha ugu fiican Ubuntu | Laga soo bilaabo Linux
Michael Gaton | | Aplicaciones
Haddii aad raadineyso xulashooyin Mozilla Firefox, biraawsarka webka ee horey loogu soo shubay Ubuntu, ka dib waxaad ka heli doontaa liiska xulashooyinka ugu fiican iyo daalacashada ugu caansan ee adeegsadayaasha Ubuntu. Ma rabtaa inaad iyaga ogaato? Hagaag aan bilowno!
6 3 siyaabood oo looga ilaaliyo daalacayaasha shabakadaha ka hortagga jabsadayaasha
6.1 Adeegso biraawsar la socda dhisme VPN ah
6.2 Ha keydin sirtaada
6.3 Xulo xulashada ku saabsan kordhinta iyo waxyaabaha lagu daro ee aad isticmaasho
Sidii aan ku sheegay hordhaca, Firefox waa biraawsarka webka ee ku yimaada asal ahaan gudaha Ubuntu astaamaheeda ka dhigaya mid ka mid ah daalacashada shabakadaha ugu wanaagsan ee maanta jira.
Waa wax aad u kala duwan, waxay leedahay tiro aan xad lahayn oo lagu daro iyo fidinno leh yutiilitiyaal kala duwan waxaana ka mid ah daalacashada gaarka loo leeyahay. Ka sokow taasi waa mid deggan oo dhakhso badan. Shaki la'aan, waa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican, laakiin haddii aad rabto inaad tijaabiso kuwa kale, waxaan rajeynayaa inaan weli haysto 4 beddelaad oo dheeri ah. Waan kuu sheegayaa!
Haddii uu jiro biraawsar aan u baahnayn soo bandhigid badan, waa Google Chrome. Yaan aqoon? Ma yahay biraawsarka par heer sare waana sida faa'iidada ah ee aad ka heshay Firefox aad iskudar gareyn karto dhammaan daalacashadaada akoonkaaga Google.
Inta soo hartay, sidoo kale waa wax aad u badan oo waxaa lagu rakibayaa fiditaanno iyo yutiilitiya oo waxyaalaha aad noogu fududeyn kara markay tahay daalacashada. Heerka amniga, waxaad isticmaali kartaa xayiraadaha khayaanada caadiga ah adigoo ku daraya biraawsarkaaga markii la rakibo.
Mid ka mid ah kuwa ugu cadcad. Opera waa mid ka mid ah daalacashada ugu ammaansan in aad ka heli doonto Ubuntu. Wuxuu la yimaadaa adeegga VPN kaas oo aad si badbaado leh uga dhex mari karto internetka inta xogtaadu amaan tahay. Intaa waxaa sii dheer, waxay ku dhexjirtaa xannibaadaha khaaska ah iyo xannibaadaha xayeysiinta ee ka dhigaya daalacashada si dhakhso leh marka la barbar dhigo daalacayaasha kale ee webka.
Dhinaca kale, maadaama ay tahay bog furaha il furan, uma baahna wax lagu daro ama kordhin.
Browser Brave waa mid ka mid ah riwaayadihii sanadihii ugu dambeeyay ee sii xoogaysanayay isla markaana si dhakhso leh isugu taagay sidii mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican marka aad dooranayso bog furaha shabakadda oo ammaan ah Ubuntu ama nidaam kale oo hawlgal.
Waana mid geesinimo leh, adoo xayiraya xayeysiinta oo u soo bandhigaya qaab ikhtiyaar ah, bixinta khidadahaas kuwa doorta inay arkaan iyo sidoo kale abuurayaasha ku jira magacaaga, waxay u oggolaaneysaa khibrad badan oo nadiif ah oo dhakhso leh marka lagu daro lahaanshaha qaababka heer amni oo u gaar ah sida aamin ah oo la xirayo isku xirnaanta https.
Ugu dambeyntii, Vivaldi waa biraawsar web in inkasta oo ay aad ugu egtahay Opera, hadana ay ku raaxeysato astaamo ka duwan Opera iyo kuwa kale oo dhan. Dhibicdeeda xoogan waa shaki la’aan dabacsanaan Markaa haddii tani ay tahay waxa aad raadineyso oo aad u baahan tahay bog internet oo aad adigu u habeyn karto ugu badnaan, laga yaabee inaad xulashadaadu tahay Vivaldi.
Si buuxda u habee khibradaada. Laga soo bilaabo maaraynta tabs-ka si loo soo gaabiyo kumbuyuutarrada, calaamadaha, amarrada, iwm. Sidoo kale, waxaad qori kartaa qoraal markaad internetka booqanayso ama aad qaadan karto shaashado buuxa, iwm.
3 siyaabood oo looga ilaaliyo daalacayaasha shabakadaha ka hortagga jabsadayaasha
Ka walwalsan amniga asturnaantaada internetka? Doorashada biraawsar wanaagsan waa lagama maarmaan si loo hubiyo in macluumaadkaaga loo xafido. laakiin sheyga halkaa ha sii joogin Haddii aad rabto in biraawsarkaaga uu ka nabad galo hanjabaadaha ay u geystaan ​​tuugada internetka, waxaan halkaan idinkugu soo gudbineynaa 3 talooyin oo aad uga fogaan karto.
Adeegso biraawsar la socda dhisme VPN ah
Adeegso biraawsar sida Opera oo horeyba ula timid dhisme VPNSi kastaba ha noqotee, haddii aad doorbideyso biraawsar kale sababta oo ah waxay leedahay astaamo aad u xiiso badan, waxaad had iyo jeer soo dejisan kartaa Linux VPN si aad u xoojiso amnigaaga.
Miyaad horeyba u dooratay biraawsarka webka ee aad u isticmaali doontid Ubuntu? Miyaad ka fikirtay qaar ka mid ah xulashooyinka amniga ee aan horay kuu tusay?
Ha keydin sirtaada
In kasta oo ay aad ugu habboon tahay biraawsarku inuu keydiyo furahaaga sirta ah inuu si dhakhso leh u soo galo dhammaan bogagga aad sida joogtada ah u booqato, runtiina waa taas u oggolaanshaha daalacashada bogagga inay keydiso xogta noocan oo kale ah ee xasaasiga ah waxay naga dhigeysaa meel liidata ka dhanka ah haakariska. Hackers kasta oo helo helitaanka kombuyuutarkaagu way fududaan lahayd, Miyaadan u malayn?
Xulo xulashada ku saabsan kordhinta iyo waxyaabaha lagu daro ee aad isticmaasho
Codsiyada yar ee aad siiso helitaanka xogtaada, ayaa ka fiican. Marka noqo mid xul ah marka aad rakibeyso waxyaabo dheeri ah iyo kordhinta biraawsarkaaga maxaa yeelay waxaa u dheer xaqiiqda ah inay saameyn ku yeelan karto xawaaraha daalacashadaada, waxaa macquul ah inaad siineyso rukhsad ka badan inta aad qiyaaseyso.
Sidaad aragtay waxaa jira xulashooyin yar oo xiiso leh markaad dooranaysid biraawsarada ugufiican ee Ubuntu. Waan aragnay 5 ugu caansan maanta laakiin sida xaqiiqada ah waad ogtahay waxbadan. Kii aad dooratidba, waxa ugu muhiimsan oo dhan ayaa ah in la hubiyo amniga kombiyuutarkaaga marwalba si looga ilaaliyo kuwa wax jabsada. Ma haysaa biraawsar aad jeceshahay? Hoos noogu reeb faallooyinkaaga!
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Bogagga shabakadaha ugu fiican Ubuntu
Yandex wuxuu mudan yahay boos isbarbardhiggan
Ku jawaab Psilocibes
Marka laga hadlayo Opera, waxaad tiraahdaa "maadaama uu yahay biraawsar il xiran, uma baahna wax lagu daro ama lagu kordhiyo", runtuna waxay tahay ma fahmin fahamka xiriirka aad ka dhaxeyso xaqiiqda ah inuu yahay isha xiran iyo kaabayaal. Opera si dhib yar uma baahnid in lagu daro maxaa yeelay waxay horeyba isugu xirtay xayeysiis xayeysiis iyo furin, iyo mid u gaar ah VPN, laakiin taasi kuma xirna xaqiiqda inay tahay ilo xiran, Google Chrome ama Vivaldi sidoo kale waa ilo xiran taasna macnaheedu maahan inaysan ahayn Waxay isticmaali karaan waxyaabo dheeri ah si loo hagaajiyo khibrada internetka (sidaan qabo uBlock Origin waa lagama maarmaan).
Marka laga hadlayo talobixinta ah in aan lagu keydin furaha sirta ah biraawsarka, ninyahow, waqtigaas xoogaa amaan ma ahayn, laakiin waqtigan xaadirka ah dhammaan daalacashada waxay bixiyaan suurtagalnimada in lagu badbaadiyo iyaga qaab sir ah, iyo marka lagu daro in lagu ilaaliyo furaha sirta ah, waana amaan ama sida amni darrada ah sidii aad ugu kaydin lahayd server-yada dhinac saddexaad iyadoo la adeegsanayo maareeyayaasha sirta daruuriga ayaa noqon kara
Waxyaabaha kale ee aan la magacaabin, Chromium lafteeda ayaa maskaxda ku haysa, taas oo aan ku jirin dhammaan howlaha raadraaca ee Google ku dhejinayo Chrome, Ungoogled-Chromium, SRWare Iron, ama Iridium Browser, in kasta oo kan dambe u muuqdo inuusan bilo ku jirin. cusbooneysii xirmada qaybinta ku saleysan Debian (waxaad leedahay xirmo cusub oo loogu talagalay Fedora, OpenSUSE, iyo Red Hat / CentOS.
Ku jawaab Anvarom
Oh iyo waan iska hilmaamay Waterfox!
Wax walba sida aad adigu leedahay.
Sidoo kale waxaa la la'yahay daraasiin sahamiyayaal: falkon, midori iyo kuwa kale oo badan.
Jawaab Jorge Venegas
Chromium bilaa Snap on Ubuntu / Mint:
Ku jawaab Venom
Geesi wuxuu u shaqeeyaa si dhakhso leh oo hufan, tan ugu wanaagsan ee aan abid isticmaalo.
Ku jawaab lepro
Halkaas waxaa ku yaal labo daalacasho oo keliya: Firefox iyo Chromium. Inta soo hartay waxaa laga soo qaatay Chromium. Google Chrome wuxuu keenaa tanno shit dheeraad ah walina waad kugula talineysaa.
Taasina waa mid kale, waxaad kugula talineysaa Ubuntu (taas oo ah habka, mar kasta oo ay sii daayaan nooc nacas ah oo leh nacas 6-bilood-dheer ah, qosol, kaalay oo ka faallood shitka ay keento) marka loo eego nooca ugu dambeeya ee aad ka heshay manga in dhan by Snap.
Meelkasta oo Debian tahay, Tuntuntu waa laga saaray
Jawab Abd Hessuk
Abd waa Konqueror oo la soo saaray ilaa 96 oo aan shuqul ku lahayn firefox ama chromium, wuxuu adeegsadaa matoor u gaar ah oo la yiraahdo KHTML oo markii dambe laga soo qaatay WebKit iyo Apple waxay u qaadatay inay horumariso Safari
Ku jawaab debianitafreoz
Waxaan u maleynayaa in biraawsarka kaliya ee keena xulashada keydinta tamarta uu yahay Opera. Aad waxtar ugu leh laptop-ka
Waan ku rakibay oo batteriga ayaa ka sii dheer kan FF.
Ku jawaab karlo
debianitafreoz konqueror kuma qorna qodobka.
Nooca cusub ee digiKam 7.0.0 ayaa yimid oo kuwanu waa warkiisa